Péro : Salanisa Mavesatry Ny Vanim-Potoam-Pahavaratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Febroary 2014 21:53 GMT
(Raha tsy misy fanamarihana manokana dia mitondra mankany aminà tranonkala miteny espaniola ny rohy rehetra)
Toy ireo taona rehetra teo aloha, nandravarava sy namoizana ain'olona ny fotoam-pahavaratra 2014 tanyamin'ny faritra maro tao Péro, namely indrindra indrindra ny tao atsimon'ny Andes sy ny atsinanan'i Amazona.
Tamin'ny tapaky ny Janoary, ny Ivontoeram-pirenena ho fiarovana ny sivily dia nanamarika fa tetezana telo no potika, tany 300 hektara nisy voly no voakasika ary maherin'ny roampolo ireo trano tra-boina noho ny orana tao Andahuaylas [fr], [any amin'ny faritr'i Apurimac. Nangatahan'ilay ivontoerana araka izany ny hanambaràna iny faritra iny hoe latsaka an-katerena. Ny faran'io volana io ihany, ny sampan-draharaha nasionaly misahana ny toetrandro sy ny rano (Senamhi – Servicio Nacional de Metorología e Hidrología) dia efa nampitandrina momba ny mety hahavoa faritra 16 tao amin'ny firenena noho ny fitomboan'ny oram-batravatra ao anatin'ny andro vitsy ho avy .
Mibahana fifamoivoizana ao amin'ny ampahan-dàlana Ayacucho-Apurímac ny fihotsahan'ny tany nateraky ny orana, ny ao Ayacucho-Apurímac…
Niteraka fahavoazana ao Andahuaylas – Apurímac ny orana
Ny 2 Febroary, nanambara ny maha latsaka an-katerena ho an'ny faritr'i Madre de Dios [fr] ny governemanta taorian'ny nahalalàna ny tatitra avy amin'ny ivontoerana ho fiarovana ny sivily izay nilaza fa, noho ny orana sy ny fiakaran'ny rano tampoka, 2.800 eo ho eo no naratra, trano 560 no rava ary 1.270 no tra-boina, 15 kilaometatra ny làlana simba, tetezana roa sy tany 782 hektara misy voly.
Toerana maro nampiantrano mpizahatany no tsy maintsy nikatona vonjimaika, noho ny tsy fananany fiantohana sahaza ho an'ny ain'ireo mpanjifany. Etsy andaniny, ireo vondrom-piarahamonina indiana any amin'ny faritra dia nahazo fanampiana ihany koa.
#MadredeDios: Olona 6.000 mahery tra-pahavoazana noho ny orana.
Miakatra ny haavon'ny renirano Beni, Madre de Dios y Acre. Mbola mijojo ny orana, velon'ahiahy ny ao Pando
Andro vitsy taty aoriana, nambara ihany koa ny maha-latsaka an-katerena ho an'ireo tanàna efatra tao amin'ny faritr'i Huancavelica [fr], raha nangataka ny hampidirana azy ireo ho anaty lisitra koa ireo tanàna hafa tao amin'ny faritr'i Pasco, ary nahazo fanampiana ireo naratra tao amin'ny distrikan'i San Pedo de Putinapunco, ao Sandia, any amin'ny faritr'i Puno, .
#Huancavelica :Nambaran'ny governemanta ho latsaka an-katerena ireo distrika maro any amin'ny faritra
Sarintanin'i Huancavelica avy amin'ny zanabolana samihafa, taloha sy taorian'ny tondra-drano.
Mangataka ny hanambaràna ny maha-latsaka an-katerena azy ireo ny ao Sandia noho ireo orana nijojo tao amin'ny faritr'i Puno
Hita ho henjankenjana ny toe-draharaha any amin'ny faritr'i Cusco. Ny 23 janoary, tranganà hamehana niisa 30 nateraky ny firotsahan'ny orana (niteraka tondradrano sy fihotsahan'ny tany) no naharaisana tatitra.
Ny 30 janoary, tao amin'ny distrikan'i Paucartambo sy Colquepata, namely tany nisy voly maherin'ny 17 hektara ny orana, naraham-pahavoazana mitentina efa ho antsasaka tapitrisa amin'ny vola “soles peroviana vaovao” [eo amin'ny 130 000 euros eo ho eo]. Tapaka tanteraka ny fifandraisan'ny distrikan'i Ocobamba amin'ny manodidina taorian'ny nihotsahan'ny havoana iray tamin'ny ampahan-dàlana mitondra mankao amin'io faritany io.
#Cusco ; tapaky ny orana ny fifandraisana amin'ireo mponina 4.000 ao amin'ny distrikan'i Yanatile [saripika]
Noraisina an-tànana ao amin'ny hopitalim-paritra ao Cusco ankehitriny ireo vehivavy bevohoka tandindonin-doza tao amin'ny faritr'i Patria-Pilcopata
Rotsak'orana mahery vaika any amin'ny tanàna goavan'i Cusco. Vaovao misimisy kokoa atsy aoriana kely.
Ny 7 Febroary lasa teo, ny ben'ny tanànan'i Pilcopata, distrika iray any amin'ny faritr'i Cusco, dia nanamarika fa mpizahatany niisa 35 avy any amin'ny Valan-javaboahary Nasionalin'i Manu, ao Madre de Dios, no mitoka-monina ao amin'io toerana io noho ny fihotsahan'ny tany nanapaka ny arabe mankany amin'io tanàna io.
Fantatra tamin'ny 11 Febroary fa Shiliana mpizahatany 51 no nihitsoka any amin'ny manodidina an'i Machu Picchu [fr] noho ny fiakaran'ny renirano iray izay nandrava tetezana. Nafindra toerana tamin'ny alàlan'ny fiarandalamby izy ireo hiala tao Cusco niaraka taminà andianà mpizahatany hafa.
Maherin'ny 50 ireo mpizahatany no mihitsoka ao Machu Picchu
Ny fanavotna ireo mpizahatany nihitsoka noho ny firodànan'ny tetezana Aobamba ao Cusco.
Tany akaikin'ny ala matevina (Selva Central), niteraka fiakaran‘ny renirano Negrony rotsak'orana, nitarika fihotsahan'ny tany nibahana ny làlana tamin'ny toerana maro tao amin'ny faritanin'i Satipo, departemantan'i Junín, ka nampitoka-monina ireo vondrom-piarahamonina valo tao.
Tao Oxapampa, any amin'ny faritr'i Pasco, mpiasa roa niasa tamin'ny fanamboarana làlana iray tao no maty taminà fihotsahan'ny tany nateraky ny oram-batravatra. Tany amin'ny faritr'i Ucayali, nambaran'ny Senamhi ho anaty loko mena ireo faritra manodidina ny renirano mitondra io anarana io ihany noho ny fiakaran'ny tosiky ny rano.
Filetsehan'ny ampahan-dàlana Villa Rica – La Merced tandrifin'i Pampa Encantada, oram-batravatra ao amin'ny Selva Central.
Latsaka an-katerena koa ny ao amin'ny alan'i Pasco… Maherin'ny 40 ireo fihotsahana nateraky ny rotsak'orana
Ny mahatsikaiky dia any avaratr'i Péro, misedra haintany henjana be ny faritr'i Piura, efa tonga amin'ny teboka mampitondra faisana ny fambolena sy ny fiompiana. Ary any atsimo, milaza hatsika mamanàla sy havandra ny vinavina momba ny toetrandro ato anatin'ny andro vitsy any Arequipa.
Lahatsoratra nivoaka voalohany tao amin'ny bilaogy (amin'ny teny espaniola) Globalizado an'i Juan Arellano.